30 taona an-tsehatra : Mpanakanto 70 hanotrona an’i Bodo -
AccueilSongandina30 taona an-tsehatra : Mpanakanto 70 hanotrona an’i Bodo
30 taona an-tsehatra : Mpanakanto 70 hanotrona an’i Bodo
Ny tantaram-piainan’i Bodo no voiziny ao anatin’ilay seho « Fiderana aloha », entiny hankalazana ny 30 taona nidirany teo amin’ny sehatry ny mozika. Mpanakanto manodidina ny 70 no hanotrona azy amin’izany. Ny 30 septambra izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro etsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina no hanolorany izany seho izany. « Hatomboka amin’ny hira fiderana ny seho entina isaorana ilay Nahary nanome ny 30 taona », araka ny fanazavan’i Bodo. « Tsy miova ny seho fa ilay bodo hitanareo tamin’ny lasa ihany no mbola ho hitanareo amin’io seho io », hoy hatrany izy. Ankoatra an’i Bodo sy ireo mpitendry efa mpiaraka aminy, dia hanotrona azy amin’io seho io ihany koa ny tarika VHF (Vavaka Hira Fiderana) ahitana ireo mpikambana nanorina azy tany aloha ahitana an-dry Luk, Mahery, Seko, Nini Kolbera, Vy… « Tsy afa-misaraka amin’ny tantaran’i Bodo ny tantaran’ny tarika VHF », hoy ihany ny fanamarihany.
Hanome endrika hafa ny seho atao etsy Mahamasina ihany koa ireo antoko mpihira izay efa niara-niasa tamin’i Bodo, ary anisan’ireny ny Tanora Masina Itaosy. « Tsy hisy ny fizarana amin’ny fampisehoana fa hifanotrona hatramin’ny farany hiray feo, hiray fo ary hiray sehatra ny rehetra », hoy ny fanazavan’i Bodo raha niresaka ny endriky ny fampisehoana izy.
Miainga avy amin’ny lohatenin’ny fampisehoana « Fiderana aloha », dia tsy ho latsa-danja amin’ireo seho teo aloha ny endriky ny seho, ary indrindra ny ravaky ny sehatra. Hisy ny fahitalavitra lehibe manodidina ny sehatra handefasana ireo sary sy horonantsary mirakitra ny tononkalo sy ny tonom-piainan’ny mpanakanto hotantaraina. Fitaovana ahitana ihany koa ireo tononkira ahafahan’ny rehetra miara-miredona ireo hira tiana.
Nifarana omaly tamin’ny 5 ora hariva ny fe-potoana hanaterana ny antontan-taratasy ho an’ireo hirotsaka hofidina ho filoham-pirenena ny 07 novambra ho avy izao. 46 ireo kandida, ary isan’ny betsaka indrindra raha oharina tamin’ny fifidianana teo ...Tohiny